2 ezilungileyo zeGeofumadas kunye nezinye kubhabho-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/I-2 i-Geofumadas enhle kunye nabanye kwi-fly
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskGoogle umhlaba / imephuMicrostation-Bentleyegeomates My
Ukulungiselela ukuthatha intombi yam iye kugqirha wamazinyo, kwaye uchithe impelaveki ende ndikushiyele amakhonkco omdla. Eyokuqala zizinto ezimbini ezinomdla endikucebisayo ukuba ubukele ngononophelo, kwaye ke umxholo wabo bafuna ukufundwa okunempilo ngoLwesihlanu ebusuku.
I-Blom, i-Visual Intelligence:
IPictometry yimveliso enomdla apho, ngokusebenzisa ukubonwa kwedatha ye-3D, kunokwenzeka ukuba unxibelelane nemifanekiso. Kuyenzeka ukuba ulinganise imigama, ukuphakama, ukubala iindawo kunye neepirouettes ezininzi, kubandakanya nokukwazi ukudibanisa inkqubo:
Ngelishwa, le mveliso yayeka ukusebenza kwi-2011, emva koko ukungavumelani I-Blom ne-Pictomety.
Phidias, ncinane ngaphaya kwe-photogrammetry
Isicelo esithakazelisayo esenziwe kwi-MDL ecocekileyo PhoCAD esebenza neMicrostation, kunye nezinye iimveliso zeBentley. Kuyenzeka ukuba usebenze kulwakhiwo lwezakhiwo ezintsonkothileyo ukusuka kwimifanekiso ukuya kwimodeli kubukhulu obu-3. umsi opheleleyo onokuba luncedo olukhulu kubugcisa bokwakha, ubugcisa bezinto zakudala, ukugcinwa kwezikhumbuzo, imboni kunye nolwaphulo-mthetho.
Umsi awukho omtsha kodwa usebenza neenguqulelo zakutsha ze-Microstation.
Iqela leCartesia: Iimpawu kunye nemiyalelo encinane eyaziwayo nge-AutoCAD
Iforamu yeGabriel Ortiz: Ukuguqulwa kwamalungiselelo TME ku-UTM
I-HispaCAD: Ukuthetha ngezixhobo ze-AutoCAD Express
IQela lokuDlulayo: Umvuzo wabaxhasi
Izinto ze-10 ezinye iiblogi ezizithethayo
Ukucaphukisa isizathu sokuba andikuxelele indlela yokukhuphela i-AutoCAD ngekhikhi yakho? Kungcono ukusiphepha ezininzi idola kunye nejele.
Mhlawumbi phakathi konyaka sinakho ikopi yokuqala yeempumelelo zikaLa Geomatics.
Elitsha sele liphume I-KMLer version kwaye ngokudlulayo basinika imephu ekhangayo yaseMzantsi Melika.
Olunye uluhlu lweGoogle Maps, ngoku ikhamera yewebhu.
I-WebGenome ijolise ukwenza imephu
AutoCAD 2008 kunye neLuxux, kubonakala ngathi kunokwenzeka ukwenza.
I-Google Earth ihlaziya imifanekiso ethile enyakatho yeSpain
Ukuba uThixo wayenayo i-Facebook, inqaku lokudala
Ukufaka i-ArcSDE kwi-PostgreSQL
Ukuhlaziywa iPlagin ukuxhuma i-AutoCAD ngeGoogle Earth
Ilungiselela uhambo lwam oluya eHouston
Ngesinye isikhathi kwi-MySQL
Ukuhlaselwa kwePalati uthi:
…”Inyani yeyokuba “yi-vertigo” kancinane abasibiza ngokuba “yiforamu enkulu” kwaye basibeke kwinqanaba elifanayo nelabanye, asinakukwazi ukuzithelekisa, kodwa enkosi”…